Fiofanana an’ireo mpitarika kôperativa
Ny kôperativa: Famoronana asa mivantana sy fandraisana anjara amin’ny fisandratan’ny firenena
Ho fanatsarana ny fitantanana sy ny famokaran’ireo kôperativa eto Madagasikara, dia nanolotra fiofanana natokana ho an’ireo mpitarika kôperativa miisa eo amin’ny 100 eo ho eo ny NCBA CLUSA, izay vokatry ny fiaraha-miasa mivantana tamin’ny MICA, ka haharitra telo andro (ny 29, 30 sy 31 Jolay 2019). Izany dia tontosaina etsy amin’ny ivon-toeram-piofanana CNEAGR Nanisana.
Ity fiofanana ity dia tafiditra ao anatin’ny fampiharana ny tetik’asa « Mamorona tontolo ho fampiroboroboana ny kôperativa » (CECE) izay vatsian’ny USAID mandritry ny 3 hatramin’ny 5 taona.
Ny tanjon’ny CECE dia miompana amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny kôperativa (ao anatin’izany ny lalàna), ny fanatsarana ny fahaiza-manao ny kôperativa, ny fanampiana ny kôperativa amin’ny fivoarana hatrany. (fanohanana) ».
Amin’izao fotoana izao dia miisa 2196 eo ho eo ireo kôperativa voasoratra anarana avy amin’ny sehatra samihafa eto Madagasikara izay mandray anjara mavitrika amin’ny famoronana asa mivantana.
Ny finiavana sy ny fandraisan’andraikitry ny MICA ny amin’ny fanohanana ireo kôperativa ireo dia hita taratra amin’ ny hetsika fanatsarana ny fahaiza-manao tahaka izao, « hoy ny Talem-paritry ny Indostria, Varotra sy Asa tanana, Ramatoa RANARISON Hanitriniaina.
Fakan-kevitra nasionaly momban’ny sehatry ny Angovo sy Fanorenana
NCBA CLUSA sy ny MICA